Burma Forum Canada isapolicy consultation body of Burmese Diaspora communities in Canada.
Happy Burmese New Year 1376
ံHappy Burmese New Year 1376"
မင်္ဂလာပါ မြန်မာနှစ်သစ်၁၃၇၆ခုနှစ်မှာကနေဒါရောက်မြန်မာများအားလုံးနှင့်အတူမြန်မာပြည်သူမျာအားလုံးကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေ၊ပြည်သူအားလုံးလိုလားတဲ့တရားမျှတမှုရှိသော၊ငြိမ်းချမ်းသော၊သာယာဝပြောသော၊စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက် ပါတယ်။
Burmese Canadian Network (B C N)
Posted by Burma Forum Canada at 10:49 AM No comments:
A remarkable Canadian farming family the Bococks.
အလွန်ထူးခြားစွာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့The Bocock Family မိသားစု(ကနေဒီယန်မိသားစု) အကြောင်းဖေါ်ပြထားတဲ့သတင်းကောင်းကိုကနေဒါဒါရောက်မြန်မာများအတုယူနိုင်ရန်
I want to share the information regarding Canadian Pioneers.
It is the true story aboutaremarkable Canadian farming family the Bococks.
Please visit the following The Farmers' Dialogue website at:
Burmese Cultural Society of Alberta (B C S A)
Posted by Burma Forum Canada at 12:05 PM No comments:
Posted by Burma Forum Canada at 10:35 AM No comments:
Urgent Campaign for Aung San Suu Kyi and Burma's Voices of Freedom
၂၅နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံငွေရတုသဘင်အခန်းအနားများကိုပြည်ပနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့တွင်ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာကျင်းပခဲ့သည်သာမကမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တွင်လည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခန်းအနားများတွင်အဓိကအကျဆုံးအချက်အဖြစ်ဦးးစား ပေးတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့၊မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ရေးလမ်း ကြောင်းတွင်ကြီးမားတဲ့အဟန့်အတားဖြစ်နေတဲ့၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ပါကမြန်မာပြည်သူအားလုံးအအတွက်လောလောဆယ်အ ချိန်တွင်ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းဟာ၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဖြစ်ပါတယ်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေဒီအဖွဲ့ချုပ်ဟာတနိုင်ငံလုံးသို့အဖွဲ့များစေလွှတ်ပြီး၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘာကြောင့်အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြည်သူများရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်နားလည်အောင်ဆွေး နွေးပွဲများကျင်းပနေတာကိုပြည်း တွင်းပြည် ပသတင်းများအရသိရပါတယ်။
၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းဟာမြန်မာပြည်သူအားလုံး၊တနည်းအားဖြင့်မြန်မာတိုင်းမြန်မာတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါတယ်၊မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးညီညွတ်စွာစည်းကမ်းရှိစွာဖြင့်စုပေါင်း ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်းဖြင့်သာအောင်မြင်ပါမည်၊တဦးကောင်းတဖွဲ့ကောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းမြန်မာတိုင်းမြန်မာတိုင်းတိတိကျကျသိဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်၊မြန်မာ တိုင်းမြန်မာတိုင်းဟာမည်သည့်နေရာရောက်ရောက်တာဝန်သိသိဖြင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ဖြစ် ပါတယ်၊
အာလန်ကလဲ့မင်းဦးဆောင်တဲ့အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားတဲ့စီမံချက်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေ၂၀၀၈ခုဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖေါ်နိင်ရေးကိုတစိပ်တပိုင်းအားဖြင့်အ ထောက်အကူပြုမည့်စီမံချက်တခုဖြစ်ပါတယ်၊အမိနိုင်ငံနှင့်မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးကိုချစ်မြတ်နိုးသူ များနှုတ်တွေ့မဟုတ်လက်တွေ့သက်သေပြရမည့်အချိန်အခါကောင်းကိုရောက်နေပါပြီ။၂၀၀၈ခုအ ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်…
Member of Use Your Liberty Team
Use Your Liberty isaglobal crowdfunding campaign toproduceaRevolutionary new Film and eBook
TRAILER: Aung San Suu Kyi and Burma's Voices of Freedom
Dear all Burmese People living in Canada & Friends of Burma .
May I respectfully ask foramoment of your time to introduce you to an essential project.
We are in the final days ofacampaign, titled - Use Your Liberty - to REFORM Burma's military -controlled Constitution - to UNBAN WOMEN from holding high office and to allow Daw Aung San Suu Kyi -amember of parliament - to run for President in the upcoming election.
The driving force of the campaign isanew film and book project titled, " Aung San Suu Kyi and Burma's Voices of Freedom," - that once funded, will be delivered freely - as dana - to every school, library, university and person in Burma, as well as to every leader of every country worldwide, with the hope of inspiring urgent support for constitutional reform in Burma. And "if there is no change to the Constitution," Daw Suu reminds us, "our country will have no real democracy."
This is the MOMENT in Burma's long struggle for freedom to STAND in solidarity and to ACT. Please watch the short video trailer for this project here or at the link below.
If moved, and I hope you are, PLEASE unleash the full force of your generosity and financially contribute to this important project at this time.
Contributions can be made on the Use Your Liberty website (see below) either by credit card or pay pal. If anyone wishes to contribute to the campaign by personal bank cheque they can do so by making the cheque payable to 'WORLD DHARMA " and mail it to:
Post Office Box 74709
Vancouver, BC, V6K 2G4 Canada
I am confident that once you see the video for this essential new book and film youwill be deeply moved to help fund this project and be part of history ... helping to bring Aung San Suu Kyi and 25 of Burma's most inspired voices of freedom to the world.
Thank you fromavery deep place in my heart.
And thank you for your generous contribution at this time.
With metta .
Coordinator,Burmese Canadian Network ( BCN )
Member of the Use Your Liberty Team
533 Buchanan Road T6R 2B7 CANADA
OR burmesecanadiannetwork @gmail.com
Posted by Burma Forum Canada at 11:17 AM No comments:
ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိသားစုဆရာဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးကြတဲ့ လက်ရှိ NLD ကျန်းမာရေးကွန်ရက် ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းနဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံ Alberta တက္ကသိုလ်က ကထိက ဒေါက်တာ ခင်စောဝင်းတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Posted by Burma Forum Canada at 5:15 PM No comments:
ယနေ့ခေတ်ကာလဆက်သွယ်ရေးစနစ်ရဲ့လျှင်မြန်ကောင်းမွန်မှုကြောင့်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုစိတ် ဝင်စားသူတိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံနှင့့််ပတ်သက်တဲ့သတင်းအများအပြားကိုတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုနာရီပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းလေ့လာသိရှိနိုင်ပါတယ်၊ယ္ခုရက်ပိုင်းလ ပိုင်းအတွင်းမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အထူးခြားဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးလှုပ်ရှားမှုသတင်းကတော့ ၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်၊မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမို ကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖယ်ဒရယ်ပြည်တောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်က
တော့နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းများကိုအခြေခံပြီးရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်၊လက်ရှိအခြေအနေကိုဂရုစိုက်လေ့လာပါအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါ မယ်၊
ခြင်းမပြုပဲနိုင်ငံတော်အာဏာကိုနောင်လာမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မာ့တပ်မတော်ကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထား နိုင်အောင်အချိန်ယူပြီးစိတ်တိုင်းကျရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်၊အဲဒီအချက်ကြောင့်အခုအချိန်မှာ၂၀၀၈ခုအခြေခံဥ ပဒေဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ရေးလမ်းမှာကြီးမားတဲ့အဟန့်အတားဖြစ်နေပါတယ်၊
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာပြည်သူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ အစိုးရကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်တာဝန်ပေးပါတယ်၊နိုင်ငံအာဏာဟာပြည်သူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာရှိပါတယ်၊အဲဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူတွေမှာရပိုင်ခွင့်ရှိသလိုတာဝန်လည်းရှိ ပါတယ်၊ပြည်သူတွေဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်းတိကျစွာနားလည်အောင်လေ့လာဖို့လို သလိုပြည်သူတွေကိုအမှန်တကယ်အကျိုးပြုမဲ့အစိုးရကိုပြည်သူတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့လို တယ်ဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်လက်ရှိ၊မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အကောင်အ ထည်ဖေါ်ဆောင်ရေးလမ်းတွင်အဓိကအဟန့်အတားဖြစ်နေတဲ့၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မဖြစ်မနေပြင်ဆင်ဖို့လိုကြောင်းမြန်မာတိုင်းမြန်မာတိုင်းသိရှိဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်၊ဒါ့ကြောင့် ၂၀၀၈ခုအခြေခံဥပဒေအောင်မြင်စွာပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူအားလုံးတွင်ကြီးမားတဲ့ တာဝန်ရောက်ရှိနေပါပြီ။
နေတာကိုမြန်မာပြည်သူတွေသိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ဤကဲ့သို့ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲကိုလျှော့မ တွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်၊သို့ပေမဲ့လည်းအဲဒီအခက်အခဲကို၊မြန်မာပြည်သူတွေဟာ၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်စည်းကမ်းရှိရှိညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့်တခဲနက်ပါ ဝင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ပါက၊လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်ပြည်သူတရပ်လုံးလိုလားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေးအတွက်၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဘို့လက်ရှိမြန်မာ အစိုးကိုပြတ်ပြတ်သားသားတောင်းဆိုလျှက်ရှိပါတယ်၊တချိန်တည်းမှာပဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဟာလက်ရှိ၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအပေါ်ပြည်သူတွေထားရှိတဲ့ဆန္ဒကိုသိရှိနိုင်ရေး အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝှန်းလုံးသို့အဖွဲ့များစေလွှတ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ဆန္ဒကိုကောက်ယူနေပါ တယ်၊အလားတူပင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းများကလဲစနစ်တကျစုပေါင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာနေကြပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာ၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်လက်ရှိကျိုးပမ်းနေတဲ့အ ရှိန်အဟုန်ကိုတွေ့မြင်ရတာအားရစရာကောင်းပါတယ်၊သို့ပေမဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်မလုံ လောက်သေး ဘူးလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်၊အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝှန်းလုံးမှာရှိကြတဲ့မြန်မာပြည် သူများဤ၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာယ္ခုထက်ပိုမိုအင်အားကောင်းစွာတခဲနက် ပါဝင်ဖို့လိုနေသေးလို့ပါပဲ၊အလားတူပင်ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးတွင်ရောက်ရှိနေကြတဲ့ဗမာအပါအဝင်မြန်မာ နိုင်ငံတိုင်းရင်းသာများအားလုံးဟာလည်းအခုအချိန်မှာပြည်တွင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့်အတူ၂၀၀၈ခု အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ဟန်ချက်ညီညီပါဝင်လှုပ်ရှားကြဖို့လိုနေသေးတာကိုတွေ့နေရလို့ပါပဲ၊
ယ္ခုအချိန်သည်မြန်မာပြည်သူတွေစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖေါ်ဆောင်ရန်အလွန်အခွင့်အခါကောင်းနှင့် ကြုံကြိုက်နေပါတယ်၊မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသာမကနိုင်ငံတကာကပါအထူးလေးစားခြင်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေ ဘက်ကမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ဦးဆောင်နေတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေပါပြီ၊ အခြားတဖက်မှာလည်းအရပ်သားတပိုင်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သဘောကျလက်ခံပြီးလိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကိုကျိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့နိုင်ငံတကာ ကိုအထပ်ထပ်အလီလီကြေငြာထားတဲ့အတွက်အဲဒီကြေငြာချက်များအတိုင်းအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင် ရွက်အောင်ပြည်တွင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ကြီးမားတဲ့ဖိအားပေးခြင်းကိုခံ နေရတဲ့အ ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်ပိုဒ်ကိုကိုင်စွဲပြီးအသက်သွေးချွေးများကိုစတေးပြီးရွပ်ရွပ်ချွံချွံကျိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်၊အဲဒီလိုမြန်မာတွေ မကြောက်တန်းမရွံ့တန်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြလို့၁၉၄၈ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်ပေါ်ထွန်းခဲ့တာပါ၊ ထိုခေတ်ထိုအခါကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စည်းကမ်းရှိရှိညီညွတ်မှုရှိရှိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပေးဆပ်မှု တွေကြောင့် တန်ဖိုးရှိလှတဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားတဲ့အခြေအနေများအရ၊ ၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းယနေ့ခေတ်မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့်မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်များကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြတ်အတည်းအခက်အခဲကိုမြန်မာပြည်သူ တွေအောင်မြင်စွာအကာင် အထည်ဖ်ါရွက်နိုင်တဲ့အချက်အဖြစ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်စည်းကမ်းရှိစွာညီညွတ်စွာတခဲနက်ပါဝင်လှုပ်ရှားရမဲ့ အခွင့်အခါကောင်းရောက်ပါပြီ၊အခွင့်အခါကောင်းများကိုထပ်တလဲလဲရရှိလေ့မရှိပါ၊ယ္ခုရတောင့်ရခဲရထားတဲ့အ ခွင့်အခါကောင်းကိုယနေ့ခေတ်ပြည်တွင်ပြည်ပရှိမြန်မာများအားလုံးတာဝန်သိစွာဖြင့်လက်မလွတ်တန်း မှန်ကန်စွာအသုံးချဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်၊မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြင့်အသက်သွေးချွေးများ ပါဝင်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပေးဆပ်မှုများကိုအရင်းတည်ပြီးရယူုပေးခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်မျိုးချစ်သူရဲကောင်းများနည်းတူ အခုဆင်နွှဲမဲ့၂၀၀၈ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ယ္ခုခေတ်ပြည်တွင်းပြည်ပရှိမြန်မာပြည် သူအားလုံးအင်တိုက်အားတိုက်တခဲနက်ပါဝင်ကျိုးပမ်းကြပါလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Posted by Burma Forum Canada at 8:18 PM No comments:
Posted by Burma Forum Canada at 5:19 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တတိယအကြိမ်မြောက် ဥရောပကို ထွက်ခွာ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဥရောပသမဂ္ဂ ၅ နိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့အတွက် ဒီနေ့ည ၇နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကနေ ထွက်ခွာသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်ဟာ ၂ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ ရှိသလို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်ကရရှိခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆု Sakharov ဆုကိုလည်း လက်ခံယူဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာ၂ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ရောက်ရှိ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Burma Forum Canada at 2:22 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသည့်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးတွင်ကနေဒါ ရောက်မြန်မာများမှန်ကန်ထိရောက်စွာအုတ်တချပ်သဲတပွင့်အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိင် ရေးအတွက်လိုအပ်သည်နိင်ငံရေးလူမှုရေးနှင့်သတင်းဖလှယ်ရေးကဏ္ဍများပါဝင်
သည့်ဆွေးနွေးပွဲများကိုကျင်းပရန်စီစဉ်ထားပါကြောင်းနှင့်မြန်မာကနေဒီယန်ကွန်ယက်ကိုလဲအဆိုပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၂၀၁၃ခုစက်တင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့ တွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်များဖြင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကနေ ဒါရောက်မြန်မာများအားလုံးအားအသိပေးကြေငြာလိုက်ပါသည်။
Posted by Burma Forum Canada at 9:12 PM No comments:
Posted by Burma Forum Canada at 12:40 PM No comments:
Posted by Burma Forum Canada at 12:54 PM No comments:
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ၈ ရက်ကြာ ဥရောပ သုံးနိုင်ငံခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို NLD ပါတီက ဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက် ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံက စတင်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး ပိုလန်၊ ဟန်ဂေရီနဲ့ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွေကို သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေက တက္ကသိုလ်တွေမှာ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ဟောပြောပို့ချမှာအပြင် ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ဖိုရမ် 2000 ပွဲမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးဇေယျာသော်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စက်တင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့မှာ ဥရောပခရီးစဉ်ကို စပြီးထွက်ပါမယ်၊ ဝါဆောတက္ကသိုလ်မှာ Education and Politics ပို့ချဖို့ရှိပါတယ်၊ ဟန်ဂေရီကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဘူတင်ပတ်တက္ကသိုလ်မှာ From Revolution to Reconstruction ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောပို့ချဖို့ရှိပါတယ်၊ ချက်နိုင်ငံ Forum 2000 မှာ Keynote Speech အနေနဲ့ Remembering Václav Havel ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောဖို့လည်းရှိပါတယ်၊ Burma's Transition ဆိုတဲ့ The Need For New Approaches By The International Community ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောဖို့လည်းရှိပါတယ်၊ ၁၇ ရက်ညနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဗမာနိုင်ငံကို ပြန်လာဖြစ်ပါမယ်” ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ အဲဒီ ၃ နိုင်ငံက လွှတ်တော်ဥက္ကဌတွေ၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊သမ္မတတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံမှာဖြစ် သလို တောင်အာဖရိက သမ္မတဟောင်း Frederik Willem de Klerk နဲ့လည်း တွေ့ဆုံမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး ခုလကုန်ပိုင်းမှာလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ခရီးသွားဦးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မှတ်ချက်။ Dr.Lun Swe Website မှကူးးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by Burma Forum Canada at 1:26 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အမှာစကားများ
"By national unity, we don't mean only unity; we mean the unity of the entire people, irrespective of race, religion, sex and sectarian and party interests, in action and not in words for national ... objectives."
-General Aung San
On the night of his election as the President of the Anti-Fascist People's Freedom League (Burma's first-ever nationally elected governing party) in January of 1946.
Burma Forum Background:
In the summer of 2004,agroup of Burmese activists gathered in Ottawa with the objective of establishingastronger and more inclusive consultative process among Burmese activist communities in Canada. Attended by 22 individuals from Ottawa, Toronto, London, Calgary and Vancouver, the meeting concluded with recommendations calling on the government of Canada to be more proactive on Burma. In the fall, the Forum came up witha47-page report containing an analysis on specific areas of concern with Canadian foreign policy towards Burma.
The 2nd Forum was also held in Ottawa in March, 2006. It included 50 participants who represented democracy activists from Burma including ethnic nationalities across Canada and the United States. The Forum touched on all Burma related issues with an emphasis on the humanitarian crisis, political issues and Canadian foreign policy towards Burma and expressed common positions on many issues. The Forum produceda2nd Report with in-depth research on Canada-Burma relations andawide range of recommendations including an increase humanitarian aid to the Burma border andamore proactive foreign policy towards Burma.
Forum related information at :
Coordinating Team of Burma Forum
Burma Forum သတင်းစဉ် (3)
Second Burma Forum Canada (1)
Coordinating Team of Burma Forum Canada
Burma Forum Canada isapolicy consultation body of Burmese Diaspora communities in Canada and has already produced two foreign policy review reports after the 1st and 2nd Forum in 2004 and 2006. Burmese dissidents living across Canada ware gather again in Saskatoon in March 2010 to exchange view on the current situation in Burma and discussacommon strategy in support of democracy in Burma.
Burma Forum Canada isapolicy consultation body of Burmese Diaspora communities in Canada
activists links in Canada
Burmese Student's Democratic Oganization
Toronto Burma Round Table
Burma Forum : BurmaForum2010@gmail.com
Min Naing : minnaing2007@gmail.com
Htun Htun Oo : htunhtunoo2006@gmail.com
Timothy Zaw Zaw : BurmaCanadian@yahoo.com
Htay Aung : htayaung938@hotmail.com
Thet Thet Tun : tun.thetthet@gmail.com
မိတ်ဆွေ့ခြေရာများ
(ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရှိ ကြံ ကြံခံလျှက်ရှိသော မြန်မာ
တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး ရဲမေ ရဲ ဘော် အားလုံး
တို့ အား ထာဝရ ဦးညွတ် ဂုဏ်ပြု လျှက် )
( လောကဓံတရားတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော
ငါကား မတုန်လှုပ် မငိုကြွေးကံတရား၏ ရိုက်ပုတ
်ခြင်းဒဏ်ချက်တို့ကြောင့်ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေး
သံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီ၏ ညွတ်ကား မညွတ် )
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း(အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၆ အမှတ် ၁၊ ၁၉၃၆ ခု)
ကနေဒါနိုင်ငံအဝှမ်း၊ ပြည်နယ် မြို့နယ် အသီးသီးမှ အဖွဲ့ပေါင်းစုံပါဝင်
Min Naing Coordinator (Saskatoon, Saskatchewan)
Htay Aung Joint– Coordinator (Vancouver, British Colombia)
Htun Htun Oo Joint –Coordinator (Toronto, Ontario)
Timothy Zaw Zaw Joint–Coordinator (Toronto, Ontario)
Thet Thet Tun Joint–Coordinator (Montreal, Quebec)
Nai Ong Tala Member (Calgary, Alberta)
Daw Molly Member (Saskatoon, Saskatchewan)
U Nyunt Hla Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Aung Nwe Oo Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Slone Phan Member (Winnipeg, Manitoba)
Phone Tint Member (Vancouver, British Colombia)
Saion Nammao Member (Vancouver, British Colombia)
Mya Thwin Member (Vancouver, British Colombia)
Kyaw Zaw Htun Member (Lethbridge, Alberta)
Yan Naing Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Klo Armstrong Member (Vancouver, British Columbia)
Soe Htay Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Maung Maung Oo Member (Toronto, Ontario)
Kyaw Khaing Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Toe Kyi Member (Ottawa, Ontario)
Tin Maung Htoo Member (Ottawa, Ontario)
Saw Ler Wah Lo Bo Member (Toronto, Ontario)
Min Thwe Member (Vancouver, British Colombia)
Zaw Gyi Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Salai Jone Member (Winnipeg, Manitoba)
Nay Myo Hein Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Htun Htun Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Nay Lin Oo Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Zaw Oo Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Aung Lin Oo Member (Vancouver, British Columbia)
Hay Mar Zin Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Sandi Htun Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Thant Zin Member (Saskatoon, Saskatchewan)
Myint Naing Member (Letbridge, Alberta)
U Than Aung Member (Edmonton, Alberta)
(1) Min Naing (2) Htun Htun Oo (3) Timothy Zaw Zaw (4) Htay Aung (5) Thet Thet Tun အမိမြန်မာပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီစံနစ် ထွန်းကားရေးနှင့် ပြည်သူတို့၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ် လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံချက်ရှိသော ပြည်သူ့အစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ကျရာအခန်းမှ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသော ကနေဒါရောက် အင်အားစုအဖွဲ့။